Amahlaya ama-Marvel Comics ama-Marvel Snags Amalungelo okuthi 'Alien' & 'Predator'
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Amahlaya ama-Marvel Comics ama-Marvel Snags Amalungelo okuthi 'Alien' & 'Predator'
by UTimothy Rawles July 2, 2020
ebhalwe ngu UTimothy Rawles July 2, 2020
Ama-slasher ama-cinematic adume kakhulu angene kwelinye izwe. Kokubili Alien futhi I-Predator manje ziyingxenye yendawo yonke eMarvel ngokusho kwe-IGN.
Vele zombili izilo ze-sci-fi aziyona into engaziwa kulowo obonisiwe-oke waba naye Ihhashi le-DC / elimnyama okweminyaka — kodwa manje basezinkampanini zamaqhawe amakhulu njenge-Iron Man, i-Spider-Man, ne-Avengers ukubala abambalwa.
Lokhu akusho ukuthi kuzoba ne-collab, kepha njenge-horror pub Igazi elizondayo amanothi, "mhlawumbe kuphephile ukulindela ukweqa" ngezakhiwo zeMarvel.
Kulabo abazibuza ukuthi izilo zingabukeka kanjani ngaphansi kwesibhengezo seMarvel, IGN ikhiphe izithombe ezimbili (bheka ngezansi) namhlanje ekuseni zidwetshwe ngumculi waseBatman uDavid Finch. Qaphela ukuthi I-Predator kubonakala sengathi imile phezu kophawu lwe-Avengers ngekhanda elinqunyiwe le-Iron Man.
Yize izithombe zimane ziyizinklamo zokudala futhi azibonisi izindatshana ezizayo, amathuba we-crossover ayamangalisa.
“Ayikho into ejabulisa ngaphezu kwendaba ezokugcina emaphethelweni esihlalo sakho, kanti u-Alien noPredator badlulise leso sikhathi kaninginingi!” kusho uMhleli Omkhulu weMarvel u-CB Cebulski ku-IGN. “Ngikhumbula ngokusobala ukuthi ngangikuphi lapho ngibona okokuqala ngazinye zobuciko bamuva banamuhla, futhi ngijabula ngokuthi bobabili baluka kanjani uvalo lwasemhlabeni nobuciko obukhulu kwezinye zezinto eziwubukhazikhazi esake sazibona kwifilimu. Futhi yilelo fa esizophila ngalo! ”
AbakwaDisney bathenga umkhiqizo weMarvel emuva ngo-2009 base befaka iFox ngo-2019. Ukuthengiswa kwamuva kwakubandakanya ikhathalogi enkulu yama-movie akudala afaka phakathi Alien futhi nomzingeli.
Muva nje kube khona ukhuluma ngokuqhubeka kwesine kuya Alien noSigourney Weaver ebuya emsebenzini wakhe wokuphuma njengoLt. Ellen Ripley.
Marvel: UDavid Finch nge-IGN
Uchungechunge lwe- 'Fallout' Ekuthuthukiseni e-Amazon nabadali be- 'Westworld'
Idokhumentari ka-'Ren & Stimpy 'ithola usuku lokukhishwa lwango-Agasti